Eva Air na-eme atụmatụ ụgbọ elu ọhụrụ si Milan na Taipei
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Eva Air na-eme atụmatụ ụgbọ elu ọhụrụ si Milan na Taipei
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Eva Air ga-emeghe ụgbọ elu ọhụrụ n'etiti Milan Malpensa na andtali na Taipei, Taiwan, na February 19, 2020.
Site na Milan ọ ga-arụ ọrụ na Tuesday, Wednesde, Fraịde, Sọnde malite na 11 nke ụtụtụ ma bịarute na 6:30 am. Si Taipei ka Milan na-apụ apụ 11:40 pm na mbata na 6:30 am. Gbọ elu ahụ ga-ewe awa iri na abụọ na nkeji iri atọ site na ọdịda anyanwụ ruo n’ọwụwa anyanwụ na elekere 12 na nkeji 30 n’akụkụ ọzọ.
"Anyị ga-enye ụgbọ elu 4 kwa izu iji jikọọ obodo 2 na Boeing 777-300ER, ụgbọ elu anyị maka ụgbọ elu dị ogologo… ruo na ngwụsị nke Machị," ka Manuel Le Goullec, onye njikwa ahịa Eva Air maka ndị njem, kwuru.
Eva Air achọpụtala onye isi na-asọmpi ya, ụfọdụ ndị na-ebu ụgbọ mmiri taa na-arụ ọrụ site na Milan ma site na ọdụ ụgbọ elu Taipei, ọ ga-ekwe omume iru ọtụtụ mba na ebe enwere njikọ sitere na ụlọ Taipei, dị ka ebe 15 na Japan, ma ọ bụ ekele maka nkwekọrịta na All Nippon Airways.
Atụmatụ a gụnyere ọtụtụ isi na Korea, PRC China, Thailand, Philippines, Vietnam, na Cambodia. Australia nwere ọdụ ụgbọ elu nke Brisbane na New Zealand dị ka kwa nkwekọrịta.
Atụmatụ Azụma na-ebu ụzọ hụ nzukọ na ihe omume mbụ na mpaghara Milan na mgbe ahụ na Northern Italy iji kwalite ụlọ ọrụ, azụmaahịa na ndị ọrụ njegharị. Ọfịs ndị njem na Taiwan na-efu efu na-egbochi mmepe nke ndị njem na-esi Italytali aga Taiwan.
Na mbu onye ọkachamara ibu si MIlan Malpensa, Eva Air ga-akwagide okporo ụzọ ibu - kwuru ka Tom Chen onye isi njikwa oftali nke Eva Air kwuru, sị: “Ebumnuche bụ ibu n'etiti tọn 5/600 kwa ọnwa.” B777 / 300ER jidere nwere ikike nke 25 ruo 35 kwa ụgbọ elu.
A na-agbakwunye pọtụfoliyo ndị ahịa ụgbọ elu nke ọma ma gụnye ọtụtụ ụdị amaala Italiantali a ma ama na ngwongwo dịgasị iche iche site na akụrụngwa, ndị ahịa, nri na ihe ọ beụ beụ, ejiji na okomoko, ike na ụlọ ọrụ, Aerospace na nchekwa nke ebe ha gụnyere Macau, South Korea na Japan ọzọ karịa Taipei.